Kitapom-taratasy: famoronana tranokala misy poketra taratasy open source | Avy amin'ny Linux
Kitapom-taratasy: tranonkala loharano mivelatra amin'ny tranokala mpamokatra loharano
Satria, tamin'ny fotoana hafa dia namoaka, nametraka sy mampiasa karazana fampiharana isan-karazany izahay Kitapom-bola Crypto, anio isika hiresaka Tranonkala «Wall Wallets» izay ampiasainy loharanom-baovao misokatra tanteraho ny tanjonao.
Izany hoe ireo tranonkala mamela sy manamora antsika hamokatra sy hanonta ireo adiresy cryptocurrency isan-karazany sy / na ireo tsirairay avy lakile fidirana (ampahibemaso sy tsy miankina) amin'ny volan'ny cryptocurrency hita amin'ny sasany andian-tsoratra Chain, mampiasa rindrambaiko open source.
Ary alohan'ny hidirantsika tanteraka amin'ity lohahevitra ity, toy ny mahazatra, dia hatolotray mialoha ny fidirana sasany lahatsoratra teo aloha mifandraika, amin'izay ireo liana te hijery lalina ny Fanapahana DeFi afaka manitatra ny fahalalany mora foana aorian'ny famakiana ity publication ity:
"Crypto wallet (kitapom-bola Cryptocurrency / poketra dizitaly) dia matetika no faritana toy izao: Ilay tetezana mamela ny mpampiasa hitantana ny vola crypto azony tamina sehatra Blockchain. Izany hoe, ny rindrambaiko na ny fitaovana miaraka amina fandraisana sy fandefasana asa dia azo tanterahina, amin'ny alàlan'ny tamba-jotra blockchain ny cryptocurrency tsirairay. Ho fanampin'izany, dia mazàna natao manokana hitehirizana sy hitantanana ny lakilem-bahoaka sy ny lakilem-bolan'ny volombatolontsika." Kitapom-bola Crypto - kitapom-bola Cryptocurrency: fametrahana sy fampiasana amin'ny Linux
1 Kitapom-bola: kitapom-bola ho an'ny crypto
1.1 Inona avy ireo poketra taratasy?
1.2 Inona no tranokala misy hamoronana Paper Wallets mampiasa loharano misokatra?
1.2.2 Wallet taratasy (Bitcoin.com)
Kitapom-bola: kitapom-bola ho an'ny crypto
Inona avy ireo poketra taratasy?
Hatramin'ny, etsy ambony no efa nazavainay, ny foto-kevitra momba ny Kitapom-bola Crypto na tsotra fotsiny Kitapom-bola Cryptocurrency, amin'ny Espaniôla. Ankehitriny dia hataontsika mazava tsara, inona ny "Wallet Wallet".
Ary ireto dia azo faritana toy izao:
"Karazana Wallet mangatsiaka na Cold Wallet, izay misy kitapom-batsy vita pirinty amin'ny fitaovana ara-batana sasany, toy ny taratasy, plastika na zavatra hafa mitovy amin'izany. Ny poketra voalaza dia misy ny lakilen'ny fanalahidy sy adiresy hitantanana ny vola crypto apetraka ao anatiny ao anaty blockchain na blockchain."
Indraindray izy ireo dia mampiditra a QR code, ka hoy io lakile sy lalana momba ny antontan-taratasy dia mety ho notarafina ary niditra mora kokoa, by fakan-tsary avy amin'ny solosaina, solosaina finday na finday ampiasaina, ary na dia amin'ny ATM cryptocurrency aza.
"Ny poketra mangatsiaka dia ireo poketra cryptocurrency izay mampiasa lakile vokarin'ny loharano iray izay tsy mifandray amin'ny sakana ary noho izany tsy amin'ny Internet. Ho an'izay antsoina hoe poketra mangatsiaka. Ity karazan-kitapom-batsy ity dia manome tombony lehibe mihoatra ny hafa, satria toy ny kaonty amin'ny tahiry izy ireo. Aiza no ahafahantsika manangona vola izay tsy hampiasantsika mandritra ny fotoana maharitra. Izy ireo no ampiasain'ny mpampiasa hametraka sy hiambina vola crypto marobe ary manome ambaratonga fiarovana tsy manam-paharoa." Inona ireo Wallet mangatsiaka?
Inona no tranokala misy hamoronana Paper Wallets mampiasa loharano misokatra?
Anisan'ireo malaza indrindra azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Jereo ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub
Wallet taratasy (Bitcoin.com)
"Fomba mahafinaritra sy azo antoka itehirizana ny Bitcoin anao ivelan'ny Internet."
Este tranokala open source tantanin'i mivantana Mpizara Bitcoin.com, mamela ihany koa hamokatra a Kitapom-bola, ho an'ny fitehirizana mangatsiaka ivelan'ny Internet azo antoka sy mahomby. Na izany aza, tena mampiasa ny generator lehibe miorina amin'ny Bitaddress.org hahatratra ny tanjona mitovy.
"Mpanamboatra kitapom-bolan'ny mpanjifa malalaka misokatra."
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Paper Wallets» na ny tsotra fotsiny Kitapom-bola, ary ireo tranonkala isan-karazany izay mampiasa loharano misokatra hamoahana ny haino aman-jery ara-batana (taratasy, plastika na hafa) zatra mitazona pirinty ireo adiresy cryptocurrency isan-karazany sy / na ireo lakile fidirana (ampahibemaso sy tsy miankina) izay manome fidirana amin'ny volan'ny cryptocurrency hita amin'ny sasany andian-tsoratra Chain; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Kitapom-taratasy: tranonkala loharano mivelatra amin'ny tranokala mpamokatra loharano
VzLinux, distro iray hafa izay mampanantena fa ho soloina lafatra ny CentOS
Fuchsia OS dia efa nanomboka nivoaka tamin'ny fitaovana Nest Hub